Zuva: Chivabvu 4, 2020
5,5 Bhirioni EURO Anounganidzirwa Corona Virus Vaccine!
Sangano reGlobal Vaccine Alliance, iro rakavambwa kutsigira kuvandudzwa kwehutachiona hwehutachiona, rakatanga musangano waro wekutsvaga mari. Pamusoro peEuropean Union (EU), nyika dzakaita seUK, Norway, Canada, Japan neSaudi Arabia [More ...]
Wokupedzisira Minute: Barber Vhudzi uye Runako Salons Vhura musi waMay 11
Mutungamiri Recep Tayyip Erdogan vakazivisa hurongwa hwavo hwekugadziriswa mushure memusangano wePurezidhendi. Zvinoenderana neshoko rekupararira riripo, mabhizinesi senge barberhops, vhudzi bvudzi, uye salons achange achishanda musi wa 11 Chivabvu. Nhoroondo ne Ministry of Interior [More ...]
Rusununguko Rwekutanga Kweanopfuura Makore makumi matanhatu Mak apfuura
Zvinoenderana nemutungamiriri wenyika Erdogan nhepfenyuro yapera mushure memusangano wekhabhodhi, kudzikiswa kwekudzika kweboka rinopfuura makumi matanhatu kuri kusimudzwa zvishoma nezvishoma munzvimbo yekutanga. Vagari vedu vanopfuura makumi matanhatu nemaviri pane mamwe mazuva evhiki [More ...]
Nguva Yabviswa Inobviswa Mumaguta 7
Zvinoenderana nekuziviswa kweMutungamiriri Recep Tayyip Erdogan nhepfenyuro inorarama, kusevha basa kuchapfuura svondo rino. Nekudaro, nguva dzekudzoka dzinosimudzwa mumatunhu manomwe uye zvichakwanisika kuenda kumatunhu aya. [More ...]
Kamwe Kamwe Chishandiso Yakabviswa muIstanbul Ankara uye Izmir Tekisi
Nechinangwa chekugadzirisa njodzi ye coronavirus denda maererano nehutano hweveruzhinji pamwe neruzhinji, kuverengera kushamwaridzana, kuchengetedza hukama hwemagariro uye kudzora kukurumidza kwekupararira kwayo, yaimboshandiswa neve Ministry of Interior neCommerce Taxi. [More ...]
Quarantine Kurudziro yeCoronavirus Varwere
Yako Covid 19 bvunzo yakaratidza kuti yakajeka, asi zviratidzo zvako zvinyoro kana unonzwa zvakanaka. Saka chii chaunofanira kuita mumamiriro ezvinhu aya? Nyanzvi dzinoti varwere vanozoshandisa nzira yega yekugara vari pamba [More ...]
Itu Rover Team, iyo Unmanned Ground Vehicle Design Degree Kwakaunza pamwe Turkey
Nemotokari yayo isina kugadzirirwa pasi, ITU Rover Team yakauya mumakumi matatu pakati pezvikwata makumi matatu nemana mumakwikwi eUniverland Rover Challenge akarongwa neMars Society muUnited States. Kuenderera mberi nebasa rake pamapuraneti ekutsvaga mabhoti [More ...]
Investment muEskişehir OBS Inoramba Ienderera mberi
Nadir Küpeli, Sachigaro weBhodi yeEskişehir OSB, akataura kuti vanoenderera mberi nebasa ravo sevatariri kuitira kuti maindasitiri agadzire nekudyara muOIZ munzvimbo yakanaka. Mutungamiri Küpeli vakati, “Nekusimudzira. [More ...]
Coronavirus Yakabata Zvakawanda Zvekunze
Turkey Exporters Assembly (TIM), maererano nemashoko aburitswa April kunze kwenyika 45 muzana kunze kwenyika kuti Eskisehir pamusoro mwedzi yapfuura, ukuwo nhamba iri mina yokutanga yakaratidza 12 muzana kuderera. Eskişehir Akarongeka [More ...]
Karakoyun Bridge Inopindirana uye Viaduct Yakakwana
Karakoyun Bridge Shanduko uye Viaduct, iyo icharerutsa zvikuru mutoro weSanliurfa, wapedzwa. Şanlıurfa Metropolitan Meya Zeynel Abidin Beyazgül rairo, mukati mechikamu chedzidzo dzakawedzera kasi kunyangwe utachiona hwe corona hwabuda. [More ...]
Basa reAsphalt Haisati Yadzikira muCurfew muEskişehir
Kuita iyo Corona Virus Action Plan nekutsunga, Eskişehir Metropolitan Municipality inoenderera mberi nemabasa ayo ichisangana nezvinodiwa zvevagari pamazuva ekubvisa. Mumamiriro ezvinhu aya, neESTRAM [More ...]
Urongwa Hutsva hweTarsus lamlıyayla Yolu Kuyana muKonak Area
Urongwa hutsva huri kuenderera mberi kuMersin Metropolitan Municipality kuTarsus uko kuyerera kwemotokari kwakachengeteka uye nekukurumidza. Iyo inobatanidza Tarsus uye Çamlıyayla matunhu, zvakare se [More ...]
İBB Sainzi Bhodhi: 'Rega Matanho Okuti Tigare Mushure memutambo'
Iyo IBB COVID-19 Sayenzi Advisory Board yakasangana neSvondo, Chivabvu 3. Kutevera musangano, kudiwa kwekudzokerwa zvishoma nezvishoma kunyorera Istanbul kufukidza Ramadan uye kare. [More ...]
IMM Yairi Kurindira Kubhadhara Campaign Yatanga! Saka Rinoshanda Sei?
Mutungamiri we İBB Ekrem İmamoğlu akaunza application rekuti "vamiswe invoice" kune mukoti wake uyo aive akaomerwa munguva yedenda. Zvinyorwa zvekushandisa http://www.ibb.gov.tr İmamoğlu akataura kuti inogona kusvikwa kuburikidza nemazwi anotevera: [More ...]
Masangano maviri akakosha eiyo yeTurkey yekudzivirira indasitiri yakabatana nemauto ane ruoko rwekuchengetedza muganho wekuchengetedza mota, Ateş. Armored Mobile Border Kuongororwa, inozivikanwa nekubatana naKatmerciler uye ASELSAN, inotungamira yekudzivirira teknoloji kambani yenyika yedu. [More ...]
Yekutanga Kambani yekutengesa Ndege Yakatangwa paSamsun Sivas Kalın Railway Line
Sivas-Samsun, Turkey wokutanga simbi njanji mutsetse yakavhurwa, mumwe mugwagwa pashure anenge 5 makore basa modernize. TCDD, iyo yakavharwa musi wa 12 Gunyana 2015 uye zvivakwa uye superstructure zvimiro zvakasimudzwa. [More ...]
Ümraniye Ataşehir Göztepe Subway ichavhurwa riini?
İBB Mutungamiri Ekrem İmamoğlu vakaongorora pa-saiti zvidzidzo muguta mukati mevheji. İmamoğlu akaita ongororo mukuvaka kwenzvimbo yemetro muAtaşehir, mvura inetsvina mu Ümraniye nepaki inochengeterwa motokari yakawanda mu Üsküdar. Kubva 2017 [More ...]
Zvinotangira Ministry of Transportation Yakachinja ..! Mazhinji maProjekiti Akakwidziridzwa ..!
Mutevedzeri weCHP Niğde Ömer Fethi Gürer akauya nemapurojekiti akaitwa basa nebazi rezvekutakurwa kwezvinhu nezviwanikwa mumakore apfuura, asi izvo zvisina kupedzerwa nguva yakareba, kuenda kuhurongwa hweTBMM nechikumbiro chemubvunzo. Zvokufambisa zvichidavidza kuna Gürer [More ...]
Tourism uye Shopping Center Mission kuCumhuriyet Street Nostalgic Tram
Mukutaura kwedu naBursa Hayrettin Eldemir, Sachigaro weBhodi yeDziviriro yeCtsika Heritage yeBursa, akavhura peji rakaparadzana reCumhuriyet Street tram pakati pezvipikiso zvinounza kubata kune chekufambisa kuwedzera kune itsva yeBursa kunzwisisa. Söze… "Iyi tramu haina kushandiswa ikozvino," yakatanga uye yakatarisana nebasa rekushanya. [More ...]
Mazano Ekudzoreredza Trafiki uye Tourism yeBursa ne3 Kubata
Chokwadi chiri mberi ndechekuti Bursa zvirokwazvo haisi guta rinosarudzika regungwa-jecha-zuva zororo. Nekudaro, iine makore mazana masere emazana emakore enhoroondo uye iri guta rekutanga reOttoman, iguta rakasiyana maererano neyechokwadi chekushanya. Iyo ichangoburwa yemafuta yekushanya uye yehutano kushanya inofamba [More ...]
DHMI Inosheedzera ..! Atatürk Airport Runways Tarisa Nei Yakaparadzwa?
The General Directorate of State Airports Authority (DHMİ) akataura chirevo pamusoro pemigwagwa inomhanya paAtatürk Airport kekutanga. Mukutaura ikoko, iyo zviuru gumi nezvina mabhiza anofamba nenzira zvisizvo akakanganisa Istanbul Airport inomira uye yekuenda-kuenda kumabasa. [More ...]
'Kupinda Rutsigiro-Diki Bhizinesi Hupenyu Mvura Chikwereti' kubva kuHalkbank
Mukati meriyero yekurwisa hutachiona hweCorona, iyo yakashanduka kuita hosha yepasi rose nemhedzisiro yayo inonzwika munyika medu, Indasitiri, Bhizimusi, Indasitiri uye [More ...]
Ministry of Commerce Inozivisa Kubvumbi Kunze Kuenzanisira
Sekureva kweGTS, kutumira kunze kwenyika kwakadzikira ne41,38% muna Kubvumbi kana zvichienzaniswa nemwedzi wegore rakapfuura uye kusvika pamabhiriyoni masere nemakumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemashanu emadhora. Nekuda kwedenda, kunyanya nyika dzeEU, dzakakosha [More ...]
Services Anopihwa naTÜBİTAK SAGE's Ankara Wind Tunnel
Mhepo tunnels ndiyo masikirwo anoshandiswa kuyedza kufambidzana kwezvinhu nemhepo inoyerera. Vatatu veaerodynamic zvidzidzo mumagadzirirwo ari ekuenzanisa manhamba, muyedzo wekudzidza (yemhepo mugero miyedzo) uye yemiedzo yekubhururuka, zvichiteerana. [More ...]
Isu tinogona kungoisa S-400B Seahawk DSH (Submarine Defense War) helikopta iri mubhodhi, sezvo zvinoita sekunge kuti kutenga kweF-35B fighter hakugone kuitika kweTCG ANATOLIAN (L-70) Amphibious Assault Ship munguva pfupi iri kuuya. Deniz kutanga kwe2000 [More ...]